चलचित्र - योजनाविनै ब्रिटिस नायिका ज्याक्सनले गरिन् इन्गेजमेन्ट
योजनाविनै ब्रिटिस नायिका ज्याक्सनले गरिन् इन्गेजमेन्ट
एजेन्सी । गत मार्चमा आफु गर्भवती भएको खबर सार्वजनिक गरेकी ब्रिटिस नायिका एमी ज्याक्सनले प्रेमी जर्ज पेनेइटोउसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । एमीले इन्स्टाग्राममा इन्गेजमेन्टको फोटो र भिडियो राख्दै जर्जसँग लामो सम्बन्ध कायम राख्नका लागि इन्गेजमेन्ट गरेको उल्लेख गरेकी छन्। एमीले गत मार्च ३१ मा आफू गर्भवती भएको सार्वजनिक गरेकी थिइन्। ‘अहिले आमा र बाबु बन्न लागेको अनुभव भइरहेको छ,’ उनले लेखेकी थिइन्। तर, एमीले एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने योजनाविनै आफू गर्भवती हुनु परेको बताएकी छन् ।	थप पढ्नुहोस्
बैवाहिक जीवनमा बाधिए दीवाकर र दीपिका
काठमाडौं । निर्देशक दीवाकर भट्टराई र अभिनेत्री दीपिका प्रसाइँ बैबाहिक जीवनमा बाँधिएका छन् । मंगलवार धनगढीमा हिन्दू परम्पराअनुसार दुबै बैवाहिक जीवनमा बाधिएका हुन् । कागजी रूपमा भने यो जोडीले केही वर्ष अगाडि नै बिवाह गरेका थिए । यो जोडीको विवाहको एक तश्बिरमा बाहिर आएको छ । दुलहा दुलहीको पहिरनमा दुबै निकै सुन्दर देखिएका छन् । बिवाह समारोहमा दुबैका परिवारको तथा आफन्तको उपस्थिति रहेको थियो । फिल्म ऐश्वर्यको सेटमा भेट भएका यो जोडीको प्रेम त्यहीबाट अंकुराएको थियो । दीवाकर फिल्मका निर्देशक थिए भने दीपिका अभिनेत्री थिईन् ।	थप पढ्नुहोस्
आजबाट रातामकैको ‘दालभात तरकारी’ प्रदर्शनमा
काठमाडौं । यस वर्षकै प्रतिक्षित चलचित्रका रुपमा हेरिएका चलचित्र ‘दालभात तरकारी’ आजबाट प्रदर्शनमा आएको छ । वैशाख २० गते शुक्रबार देखि फिल्म ‘दाल भात तरकारी’ प्रदर्शनमा आएको हो । यो फिल्मले हलमा सोलो प्रदर्शन पाएको छ । वैशाख १३ गते प्रर्दशन हुने भनिएको फिल्म हलिउड बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘एभेन्जर्स एण्ड गेम’ रिलिज भएपछि एक हप्ता पछाडी सरेको हो । ‘दाल भात तरकारी’ले सोलो रिलिज पाउदा हलमा ए मेरो हजुर ३ र हलिउड फिल्म एभेन्जर्स एण्ड गेम पनि लाग्ने छ । मह सञ्चारको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको फिल्म ‘दाल भात तरकारी’ यो वर्षकै बहुप्रतिक्षित फिल्म हो ।	थप पढ्नुहोस्
श्वेतालाई ट्यूमर देखिएपछि अचानक शल्यक्रिया, फेसबुकमा लेखिन मैले दोस्रो जिन्दगी पाएँ
काठमाडौं । अभिनेत्री श्वेता खड्काको गर्धनमा ट्यूमर देखिएपछि भारतमा शल्यक्रिया गराइएको छ । आफ्नो शल्यक्रिया सफल भएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएकी छन् । श्वेता आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘हेल्लो जिन्दगी’ को सुटिङका लागि लन्डन पुगेकी थिइन् । त्यहाँ केही दिन सुटिङ गरेपछि आफू अस्वस्थ बनेको उनले बताएकी छन् । श्वेताले लेखेकी छन्, ‘लन्डन जानुभन्दा केही दिन अगाडि पनि मेरो चिउँडो मुनिको भागमा दुखाई भएको थियो । डाक्टरसँग परामर्श गर्दा ट्यूमर देखियो । तर, यसबाट डराउनु नपर्ने र केही महिनापछि शल्यक्रिया गर्दा पनि हुने डाक्टरले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
जिवन जात्रा हो, शास्त्रमा लेख्नलाइ छुट्या मात्र हो !!!
काठमाडौं । प्रदीप भट्टराई निर्देशित ‘जात्रै जात्रा’को ट्रेलर शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । प्रदर्शन मिति नजिकिदै गर्दा निर्माण युनिटले ट्रेलर ल्याएको हो । दयाहाङ राई, विपिन कार्की, रबिन्द्र झा र रविन्द्र सिंह बाँनिया देखिएको ट्रेलरमा कमेडी हावी रहेको छ । फिल्म ३ जेठबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो फिल्म करिब २ वर्ष अगाडि आएको ‘जात्रा’को सिक्वेल हो । सार्वजनिक ट्रेलरमा अभिनेत्री वर्षा राउत, कलाकार राजाराम पौडेल समेत अटाएका छन् । रविन्द्र सिंह बनियाँ कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा यज्ञश्वर पौडेल र सिंगे लामाको लगानी छ ।	थप पढ्नुहोस्
‘दालभात तरकारी’मा एन्टीबायोटिक खादै प्रियंका
काठमाडौं । चलचित्र ‘दालभात तरकारी’को आइटम गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘एन्टीबाइटिक खाउँला’ बोलको गीतमा नायिका प्रियंका कार्कीले बोल्ड नृत्य प्रस्तुत गरेकी छन् । सम्भुजित बाँस्कोटाले संगीत र हरिवंश आर्चायको शब्द रहेको गीतमा मिना निरौलाको स्वर रहेको छ । संगीत संयोजन रिकेश गुरुङको रहेको छ । मह सञ्जारको प्रस्तुतिमा किरण केसीले निर्माण गरेको फिल्मलाई सुदन केसीले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको कथा लेखन हरिवंश आर्चायको रहेको छ । रमिला आर्चाय, नरेन्द्र कंसकर, शिवहरी पौडेल, यमन श्रेष्ठ फिल्मका निर्माता हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जीवनीमा आधारित चलचित्र ‘पिएम नरेन्द्र मोदी’ निर्वाचन नसकिँदासम्म प्रदर्शन नहुने भएको छ । सो चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन माग गर्दै उजुरी परेपछि रोक लगाइएकोमा निर्वाचन अगाडी नै फुकुवा हुने सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोग श्रोतले जनाएको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सो चलचित्रले असर पार्ने भन्दै मोदीका विपक्षीहरू निर्वाचन आयोग र अदालतमा पुगेका थिए । ‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सकिनु अगाडि अर्थात् आउँदो मे १९ अगाडी सो चलचित्र प्रदर्शन गर्न दिननहुने पक्षमा रहेको छ,’ श्रोतले एएनआईसँग भन्यो ।	थप पढ्नुहोस्
चलचित्र ‘वीर विक्रम २’को ट्रेलर सार्वजनिक
काठमाडौं । चलचित्र ‘वीर विक्रम २’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । मिलन चाम्सको निर्माण तथा निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रमा नायकद्धय पल शाह, नाजिर हुसेन, नायिका बर्षा सिवाकोटी, कलाकार बुद्दि तामाङ मुख्य भूमिकामा छन् । चलचित्रको कार्यकारी निर्माता अर्पण सापकोटा हुन् भने रन्जिता सिवाकोटी यसकी सह–निर्मात्री हुन् । चलचित्रलाई प्रदिप भारद्धाजले लेखेका हुन् । चलचित्रमा बनिष शाहको सम्पादन, सुदिप बरालको छायांकन, हिमाल केसीको एक्सन छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रेम, मित्रता, एक्सन र दुश्मनीले भरिएको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
चुनाव प्रचारमा हिँडेका बलिउड नायकको मृत्यु
काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को रामनाथपुरम लोकसभा सिटबाट उम्मेद्वार बनेका नायक नागेन्द्रनका लागि चुनाव प्रचारप्रसारमा खटिएका भारतीय कलाकार जेके रितेशको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको छ । ४६ वर्षका रितेशलाई हृदयघातलगत्तै अस्पताल पुर्याइएपनि चिकित्सकले बचाउन सकेनन् । रितेश १५ औं लोकसभामा डिएमके पार्टीका सांसद पनि थिए । जेके रितेशलाई अन्तिमपटक फिल्म एलकेजीमा देखिएको थियो । उनको परिवारमा उनकी श्रीमती जोथीश्वरी र तीन सन्तान छन् ।	थप पढ्नुहोस्
किड्नीको उपचारमा चमत्कार, बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोला !
काठमाडौं । कुनै समय नेपाली रजतपटमा निकै रुचाइएकि नायीका नन्दिता केसिको पछिल्लो चलचित्र अमेरीकन बाबु मेड इन नेपाल सार्वजनिक गरिएको छ । अमेरीकामा निर्माण गरिएको र अमेरीका र क्यानडामा रुचाइएको चलचित्र अमेरिकन बाबु मेड इन नेपाल सिधै यूटुवमा रिलिज गरिएको हो । चलचित्रका निर्देशक तथा निर्माता बाहिर रहेको र नेपालमा बितरक तथा हलवाला संग बारम्बार ताकेता गर्न नसकेको कारण फिल्म सिधै ड्रिम्स गेट नेपाल को अफिसियल यूटुव च्यानलमा मा रिलिज गरिएको निर्देशक इश्वर थापाले जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्